Qaraxyo Iyo Weerar Saaka Lagu Qaaday Koonfurta Gaalkacyo Oo Nin Sheekh Sheegan Jiray Iyo Xertiisiina Lagu Laayay | Berberatoday.com
Qaraxyo Iyo Weerar Saaka Lagu Qaaday Koonfurta Gaalkacyo Oo Nin Sheekh Sheegan Jiray Iyo Xertiisiina Lagu Laayay
Galkacayo(Berberatoday.com)-Labo qarax oo xooggan iyo weerar toos ah ayaa saaka lagu qaaday magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug, iyadoo la weeraray xarun uu degenaa wadaad caan ka ahaa koonfurta Gaalkacyo hadal hayntiisuna waayadan danbe badnayd.
Wararka ayaa sheegaya in qarax ismiidaamin lagu weeraray xarun uu Koofurta Gaalkacyo ka degenaa wadaad lagu magacaabi jiray C/weli Cali Cilmi Yare, waxaana xarunta wadaadka gudaha u galay dabley hubeysan.
In ka badan 11 ruux oo uu ku jiro wadaadka ayaa ku geeriyooday qaraxyada iyo weerarka tooska ah ee lagu qaaday xarunta wadaadka.
Sidoo kale waxaa la sheegayaa in toogasho lagu dilay xertii Wadaadka ee xarunta deganeyd iyo rag ilaalo uu lahaa wadaadka.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Ciidamada gaashaan ay toogteen qaar ka mid dableydii gudaha u gashay xarunta wadaadka, waxaana weli la soo sheegaya in rasaas laga maqlayo xaruntaha welina aan howl galkii dhamaan.
Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerarka saaka lagu qaaday xarunta wadaadka, kuwaasoo sheegay inay dileen C/weli Cali Cilmi Yare oo ay ku eedeeyeen inuu nabinimo sheegtay.
C/weli Cali Cilmi Yare ayaa horey xiisad ka dhex dhaliyay bulshada Galmudug, kaddib markii uu ka soo muuqday filimaan lagu baahiyey Youtube oo u badan heeso dhalinyarada ku barayo xadrada iyo qoob ka ciyaar, waxaa sanad ka hor Maxkamad ku taal gaalkacyo kusoo oogtay dambi ah inuu Nabinimo sheegtay, inkastoo markii dambe la sii daayey muran kaas oo mudo ka socday Baraha bulshada.